Dove Volume Nourishment Shampoo – SUNNY eSTORE
160ml - 2,420 Ks320ml - 4,070 Ks340ml - 4,000 Ks
တစ်ချို့အမျိုးသမီးများသည် မွေးရာပါ ဆံလုံးသေးကြသည်။ တစ်ချို့မှာခေါင်းလျှော်သည့် အကြိမ်နည်းပါးလွန်းသောကြောင့် (ဥပမာ တစ်ပတ် တစ်ခါ) အဆီထွက်များပြီး ဆံပင်ပါးကပ်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဆံပင်အုံထူအောင် ခေါင်းနောက်ပြန်ဖြီးခြင်း၊ တစ်ညလုံးကျစ်ဆံမြီးကျစ်ထားခြင်း၊ ကောက်စက်ဖြင့် ဆံပင်အုံထူအောင်ကောက်ခြင်း တို့ပြုလုပ်ကြသည်။ သို့သော် ထိုအပြုအမှုများသည် နာရီပိုင်းပဲခံသည့်အပြင် ဆံပင်ကိုခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းစေနိုင်သည်။ ခေါင်းလျှော်ရည်အရောင်မှာ ကြည်လင်သောအရောင်ရှိပြီး Oxyfusion နည်းပညာအသစ်၏အစွမ်းဖြင့် Dove Volume Nourishment သည် ပါးကပ်သည့်ဆံကေသာကို အပြည့်အဝအားဖြည့်ပေးပြီး ပုံမှန်ထက် ၉၅% အုံပိုထူသော ဆံကေသာပုံစံရရှိစေသည်။
Some women faceaconstant struggle to truly care for the needs of dry, flat locks in order to get the nourishment their hair needs plus the volume it craves. Some of them go through extreme measures to get volume only to have it fall flat inafew hours such as braiding hair overnight, using curling irons or back combing their hair to obtain volumised hair. But those only lasts forafew hours and left hair with dry and rough. With it’s transparent liquid and Oxyfusion Technology, Dove Volume Nourishment nourish flat hair and create fuller looking hair by +95%.
Applyacertain amount on wet hair and gently rinse with water.
Available sizes - 160ml, 320ml. 340ml